Lokho izingane ezikudinga kakhulu kubazali bazo.
Kungani izingane zithukuthela nokuthi ungakwelapha kanjani ngokushesha ukucasuka.
Amathuluzi afanele ongawasebenzisa ekukhuliseni izingane zakho ukuze zijabule, zibe nempilo, zihlakaniphe futhi zizethembe empilweni.
Ukukhulisa ingane ejabule, enempilo akuyona into efundiswa abazali abaningi. Eqinisweni, abaningi bavele bakhubeke kuyo yonke inqubo, yize benezinhloso ezinhle kakhulu. Ngenxa yalokho, kujwayelekile kakhulu ukuthola isimo esingajabulisi emindenini, nokuhilizisana okungapheli phakathi kwabazali nezingane.
Akusona isimo semvelo sezinto. Eqinisweni, kungagwenywa ngokuphelele. U-L. Ron Hubbard wasungula izindlela eziningi zokuletha okuhle kakhulu enganeni—nakubazali bayo. Kulesi sifundo, uzofunda ngezinye zalezi zindlela bese uthola ukuthi ungamkhulisa kanjani umntwana ngaphandle kokwephula umoya wakhe, ukuthi ungaba kanjani nengane ezimisele ukufaka isandla emndenini nokuthi ungayisiza kanjani ingane ukuthi ikwazi ukubhekana nezinkinga zansuku zonke futhi usizi lokuphila.
Ukukhulisa izingane kufanele kube yinjabulo. Futhi kungaba njalo. Eqinisweni, kungaba ngomunye wemivuzo emikhulu kunabo bonke abantu. Ukusetshenziswa kwemigomo ye-Scientology ekukhuliseni izingane kungaqinisekisa ukuthi bayajabula, banothando futhi bayakhiqiza, nokuthi baba ngamalungu ahlonishwayo emiphakathini abaphila kuyo.
Lapho sekuqediwe Isifundo se-Izingane, uzothola isitifiketi nge-email.
“Sengifunde amakilasi amaningi okukhulisa izingane ekolishi, futhi ngifundeni kuzo? Lutho! Futhi kufanele ngithi, angivumelananga nezinto eziningi abazifundisayo. Ngangizonda ukuthi emakilasini asekolishi babheka kanjani ingane sengathi yizinhlobo ezihlukile. Kodwa incwajana ethi Children ithi izingane zingabantu abadala abancane.
“Le ncwadi inezindlela eziwusizo kakhulu ezisebenzayo. Kuyimpumelelo enkulu kimi, ngoba ngisebenza nezingane nsuku zonke futhi imininingwane ekule ncwajana ukuphela kwencwadi engiyifundile ngezingane engivumelana nayo empeleni!
“Lokhu ngingakutusa kunoma ngubani, hhayi nje kuphela abantu abanezingane noma abasebenza nezingane, kodwa wonke umuntu. Njengazo zonke izincwadi zika-L. Ron Hubbard, zifundeka kalula futhi ziqondakale, zihlelekile, futhi imininingwane ibaluleke kakhulu.”
“I-Children Course inginikeze ithuba elilodwa lokufunda ngokuqeqeshwa kwezingane okufanele, ukukhulisa ingane ejabule nenempilo, kanye namakhono amaningi angaphakathi anikezwe wona izingane.
“Phakathi nalesi sifundo, ngifunde ukukwazisa, ukwazisa nokwazisa amagalelo omfowethu omncane noma ngabe angaphansi kangakanani emndenini. Ngenxa yalokhu, umfowethu omncane manje uhlala ezweni elihlukile, umhlaba lapho aqoqosha khona igumbi lakhe yedwa, ubeka izinto endaweni yazo efanele kungabikho muntu omgqugquzelayo futhi okungimangazayo ukuthi uzongisiza ekhishini.
“Ngaphezu kwalokho, ngiyekile ukuphazamisa izinqumo zakhe futhi ngambeka imigoqo eqinile mayelana nohlobo lwabangani okufanele enze, lapho kufanele engafanele ukuya khona, njll. Kusukela lapho, ukhule waba yingane ethandekayo ebengiphupha ngayo. Akasavukeli ngoba ngingena kuphela ukupholisha ezinye zezinqumo zakhe futhi angiphoqi ezami kuye. Ngokujabulisayo, nesifiso sakhe sokuba usosayensi wama-computer sikhona kulesifundo.”